वरूण धवन, टाइगर श्रफ, रणवीर सिंह, रणवीर कपुर आदिका आ-आफ्नै प्रमिका भए पनि उनीहरूलाई बलिउडका ‘डिजायरेबल ब्याचलर’का रूपमा हेरिन्छ। बलिउडमा अविवाहित हुँदा फ्यान फ्लोइङमा बढोत्तरी हुने कुराले पनि राम्रै चर्चा पाउँछ। विशेषगरी यो अविवाहित हिरोइनहरूको मानेमा ज्यादा लागु हुने बताइन्छ। तर बलिउडमा त्यस्ता सुपरस्टारहरू पनि छन् जसको लोकप्रियतालाई उनीहरूको विवाहले कुनै फरक पारेन। ती स्टारहरू बलिउडमा जम्नु अगाडी नै वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेका थिए। त्यस्ता बलिउड कलाकारहरूको सूचि यस्तो छ:
१. आमिर खान-रिना दत्त: आजबाट आमिर खान ५२ वर्ष लागेका छन्। ‘कयामत से कयामत तक’बाट उनले डेब्यू गरे। हाल उनी किरण रावसँग दोस्रो वेवाहिक जीवनमा खुशी छन्। किरण अगाडी उनले आफ्नी बाल्यकालिन साथी रीना दत्तसँग विहे गरेका थिए। उनीहरूको धर्म फरक भएकाले पारिवारिक मञ्जुरीको बेवासता गर्दै उनीहरूले भागेर बिहे गरे र १० चलेको वैवाहिक जीवनले सन् २००२ मा विश्राम पायो।
२. शाहरूख खान-गौरी खान: शाहरुख र गौरीको प्रेमकथा पनि कुने फिल्मको भन्दा कम छैन्। उनीहरूको जोडीलाई बलिउडको आदर्श जोडीका रूपमा हेरिन्छ। शाहरुखले गौरीसँग सन् १९९१ मा विहे गरेका थिए जबकी उनको पहिलो फिल्म ‘दिवाना’ उनीहरूको विवाहको १ वर्षपछि रिलिज भएको थियो।
३. सैफ अलि खान-अमृता सिंह: सैफ अलि खान हाल करिना कपुरसँग विवाहित छन् तर उनको पहिलो विवाह आफ्नो समयकी चर्चित अभिनेत्री अमृता सिंहसँग सन् १९९१ मा भएको थियो। सैफले आफूभन्दा १२ वर्ष जेठी अमरतासँग विवाह गरेका थिए। विहे गर्दा सैफको कुनै फिल्म रिलिज भएको थिएन्। विहेको २ वर्षपछि उनी अभिनित पहिलो फिल्म ‘आशिक आवारा’ रिलिज भएको थियो। उनीहरूको विवाह १४ वर्षपछि टुङ्गियो।
६. चित्रांगदा सिंह-ज्योति रंधावा: सन् २००१ मा चित्रांगदाले चर्चित गल्फर ज्योति रंधावासँग २००१ मा विहे गरिन्। त्यसको दुई वर्षपछि उनले ‘हजारो ख्वाहिशें ऐसी’बाट डेब्यू गरिन्। सन् २०१४ मा उनको पनि डिभोर्स भयो।
७. आयुष्मान खुराना तथा ताहिरा: ‘विक्की डोनर’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेका आयुष्मान चर्चित हुनुअघि नै विवाहित थिए। फिल्ममा आउनु १ वर्ष अघि सन् २०११ मा विहे गरेका थिए।
शशी कपुर-जेनिफर: आफ्नो जमानाका चर्चित स्टार शशी कपुर फिल्ममा आउनु अघि नै विवाहित थिए। उनले हलिउड अभिनेत्री जेनिफर केन्डलसँग विवाह गरेका थिए। विवाहको दुई वर्षपछि उनले ‘धरमपुत्र’बाट सन् १९६१ डेब्यू गरे।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४ ०७:०१:३४